Kaaliyaha Google ayaa fududeyn doona wada hadal aan hakad lahayn | Androidsis
Astaamo badan oo cusub ayaa imanaya Kaaliyaha Google bilahaan, sida interface-ka cusub ee horay loo tijaabiyay. Google waxay in muddo ah raadineysay inay ka faa'iideysato kaaliyeyaasheeda, sidaas darteed waxaan rajeyn karnaa inay jiri doonaan warar goor dhow. Xaaladdan oo kale, shirkaddu waxay mar hore ka shaqeyneysaa hawl u oggolaan doonta wadahadal buuxa oo lala yeesho kaaliyaha.
Fikradda ayaa ah in isticmaaleyaashu ay awoodi doonaan wadahadal hufan la yeelo Kaaliyaha Google. Markaa kaaliyaha ka jawaab celinta ayaa si weyn kor loogu qaadi lahaa, iyada oo ay yaraanayaan carqaladeynta iyo ku fiicnaashaha marwalba. Nidaam cusub oo dhowaan soo socda.
Shirkaddu waxay ku shaqeyn laheyd nidaam taleefanku uu kuxirankaro makarafoonka markasta oo su'aal laga jawaabo. Qaabkan, waxaan kusii wadi karnaa lahadalka Kaaliyaha Google, adigoon isticmaalin amarka "OK, Google" markale. Maxaa noo oggolaan doona inaan sameyno weydiimo dheeri ah oo isku xigxiga, oo aan hakad lahayn.
Su’aashu waxay tahay shaqadan miyaa sidoo kale gaari doonta taleefannada. Ilaa hadda, iyadoo lagu saleynayo xogta soo gaadhay, waxaa la ogyahay inay yihiin tijaabinta bandhigyada casriga ah. Laakiin waxba lagama sheegin suurtagalnimada in loo adeegsado taleefannada casriga ah. In kasta oo ay tahay wax xaqiiqdi ku dambaynaysa inay dhacdo.
Tan iyo markii ay noocan oo kale ah kaaliyaha Google, way fududahay waa lagu ballaadhin karaa noocyada kale ee qalabka. Markaa haddii wax qabadkeedu fiicnaado, markaa wax lala yaabo ma aha in sidoo kale loo adeegsado taleefannada. Laakiin xilligan waxay ku jirtaa weji bilow ah.
Waa inaan sug dhowr bilood illaa iyo inta la bilaabayo shaqadan ayaa si rasmi ah ugu jirta Kaaliyaha Google. Shirkaddu way ka shaqeysaa, iyadoo horeba u sameysay baaritaanno. Laakiin lama siinin waqtiyo rasmi ah oo ay ku hawlgeli doonaan. Marka waxaan sugeynaa shirkadda lafteeda in ay wax badan ka sheegto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Inaad wadahadal joogto ah la yeelato Kaaliyaha Google way kuu suurtoobaysaa